1Russian XBIT, nke ụlọ ọrụ N. Ise. 1lọ ọrụ1X Corp. ikike na Curaçao. Ebumnuche gị? Bibie ụwa nke egwuregwu ịntanetị. Olee otu? Site na nnukwu ụlọ ahịa katalọgụ ma nwee ọnụahịa ga-aka nke anyị karịa (ha onwe-ha) ahụtụbeghị. Anyị na-ekwukwa banyere ego nnabata nke ahụ […]
netwọlọ paris Unibet Casino nke Unibet kewara ekewa. Ma ikike sitere na Malta (SMG), ụlọ ọrụ swedish nwere ụfọdụ egwuregwu kacha mma n'ịntanetị dị n'ịntanetị, ebe ọ na - eji sọftụwia atọ kachasị mma dịka Net Entertainment, Microgaming o Yggdrasil. Mana ibu NetEnt kariri ụzọ atọ […]
Mgbe Bwin, n'agbanyeghị n'okpuru aha ochie Betandwin, amuru na Vienna na 1998, o siri ike onye ọbụla nwere ike ịkọ ụzọ ihe ịga nke ọma. Karịa 22 nde ndị ahịa etinyela ego na egwuregwu ha, onye ghọrọ otu n’ime ndị na - eme egwuregwu n’ụwa niile. Ọ bụ ezie na nsọpụrụ bụ nnọọ […]
N'azu 888sport na akara, uwa ama ama nke 888 Holdings PLC. Site na 2008, ụlọ ọrụ ahụ na-enye poker na cha cha na ịkụ nzọ egwuregwu. ika emerela ngwa ngwa di ka onye nlere anya nke ulo ndi paris. Na nyocha anyị, anyị ga-eso onye na-eme ọrụ na njikwa isi ihe […]
Ọ bụrụ na nnukwu aha ụlọ ọrụ egwuregwu mba ụwa dị na Paris, enweghị ike iwepu na ndị na-ahụ maka mkparịta ụka n'ịntanetị Betfair.This England, Usoro ọnụahịa Paris ghọtara site na sistemụ. N’okpuru, ka anyị lerukwuo egwuregwu anya na mpaghara niile dị mkpa. Ọ bụ mkpa anyị? Kedu ka Paris siri nwee ntụkwasị obi? Enwere ego […]
Ọ bụ ezie na ahụmịhe bara ụba, ika dị na Spain n'ọnwa gara aga. Na mba anyị, nke General Directorate nke amblinggba Cha cha, kwadoro (CHINEKE) bụ njedebe nke data, yabụ anyị nwere ike ịtụkwasị obi nchekwa nke ikpo okwu. Usoro egwuregwu nke ndị Spain kwadoro na ọbụna ihe ọchị karịa na Paris nwere ike idozi nke a […]
Rolerụ ọrụ dị mma karịa n'ụlọ bụ ihe onye ọ bụla maara, mana ọ bụ eziokwu na ikuku dị na cha cha ahụ apụ n'anya. Mana gịnị kpatara anyị ga-eji chere maka ngwụcha izu iji gaa cha cha ma nwee egwuregwu a? Nke a bụ ihe ụlọ ọrụ na-aga gburugburu, onye nwere […]
Interwetten bụ otu n'ime ndị na-eweta ịkụ nzọ egwuregwu egwuregwu na Europe. E hiwere ụlọ ọrụ Austrịa na 1990 de Wolfgang Fabian; n'oge ahụ dịka nwa akwụkwọ nke akụ na ụba, ndị na-eto eto na-azụ ahịa gbara mbọ ịbanye na ụlọ ọrụ egwuregwu. Na 1996, Agara m na ntanetị wee malite nke mbụ na Paris. […]
Ka anyị na-azụlite teknụzụ ọhụụ, imeghari Luckia nwere ike ịga na weebụsaịtị ya iji mezuo ihe ọ bụ taa. Ọ dị mkpa maka ụlọ ọrụ iji mee ka ndị ọrụ mara ụdị mgbanwe ọ bụla iji mee ka ahụmịhe egwuregwu ha dị ka o kwere mee.. Ọzọkwa, egwuregwu n'ime ụlọ egwuregwu, ime ụlọ […]
Ọ bụrụ na ị gaa na ebe nrụọrụ weebụ ha, N’oge na-adịghị anya ị ga-ahụ na enwere nnukwu ndo na ọtụtụ ihe ọidsụ .ụ, njirimara abụọ dị mkpa maka onye ọkpụkpọ ọ bụla chọrọ ịnụ ụtọ egwuregwu egwuregwu. Ebumnuche nke saịtị a bụ iji nye ndị egwuregwu ihe kachasị mma ma nwee ahụ iru ala 5 afọ nke ahụmahụ na ụlọ ọrụ a […]